Yakanakisisa Stainless Steel Trailer Hydraulic Disc Brake Caliper Manufacturer uye Factory | KTG
Stainless Simbi Trailer Hydraulic Disc Brake Caliper
Pane zvakawanda zvinotsiva zvikamu zvauchazoda kuti utore mota yako mumakore apfuura, uye brake calipers zvirokwazvo imwe yacho. Pasina mabhureki caliper, ipapo, hapana motokari yaizokwanisa kumira. KTG AUTO inotarisa pakugadzira mabhureki zvikamu zvemarketmarket. Yese KTG Aftermarket Brake Caliper inoenderera mberi nekuita uye kutsanangurwa kweiyo yekutanga OE chikamu. Zvigadzirwa zvedu hazvingo shandiswa zvakanyanya mumotokari dzevatyairi nemarori, asiwo mumatrailer.
Zvinodiwa zve disc hubs uye rotors
Stainless simbi caliper muviri uye pad inotsigira ndiro inogona kudzivirira kukora kwemvura yegungwa.
Kukwirisa mabhoti, maspring washers anosanganisirwa. Kurumidza uye nyore kuisa.
Ziva Zvakawanda Nezve Disc Trailer Brake Caliper
Vanhu vakawanda vari kushandura matrailer avo kune disc mabhureki, uye nechikonzero chakanaka. Mabhureki edhisiki anoburitsa mabhureki asingachinji - kunyangwe pakumhanya kwemumugwagwa mukuru - zvakasiyana nemabhureki edhiramu, ayo anowanzo ratidza kudonha kwakanyanya mubhureki torque nekumhanya kwakanyanya. Pamusoro pezvo, mabhureki edhisiki anopa chinhambwe chipfupi chekumira pane mabhureki edhiramu. Disc brake calipers ine chikamu chimwe chete chinofamba, pane akawanda anowanikwa mumabhureki edhiramu. Izvi zvinoreva kuti kune zvikamu zvishoma zvekuchengetedza, zvikamu zvishoma kuti zvikuvadzwe uye zvikamu zvishoma zvinofanirwa kugadzirisa kana kutsiva, nokudaro kuderedza mari yekugadzirisa. Yakakwidziridzwa trailer calipers ine yakakwirira yekudzivirira ngura, yakakwira corrosion kuramba, uye yakanakisa anti-kupfeka kuita. Iyo hydraulic trailer brake calipers inokodzera matrailer ezvikepe, mabhokisi matrailer, uye matrailer emota.
1400 kg (15"/16" vhiri), 1600 kg (13"/14" vhiri)
Bolt Spacings 88.9mm (3.5”)
Kuiswa Hardware Inosanganisirwa Ehe
Mounting Bolts Inosanganisirwa Aihwa
Package Zviri mukati Caliper; Hardware Kit
Pads Included Aihwa
Zvakapfuura: Front disc brake caliper drive side yeFord F150
Zvinotevera: Trailer DRUM
Disc Brake Caliper Zvikamu
Discs uye Calipers